လမျးပျေါမှာ အောငျပှဲခံနတေဲ့ လူအုပျကွီးအတှကျ ကိုဗဈလူနာ သူနာပွုဆရာမလေးရဲ့ ရငျထဲကစကား – Let Pan Daily
Let Pan | November 11, 2020 | Local News | No Comments
ကြှနျမသာ ခုခြိနျ လူနာအဖွဈနဲ့ ဆေးရုံပျေါမှာ ရှိမနခေဲ့ဘူး ဆိုရငျ… Scrub Suit လေးဝတျ ဝနျထမျးကတျလေး အိတျထဲထညျ့ပွီး အောငျပှဲခံနတေဲ့ လူအုပျကွီးဆီ ကားတနျးတှဆေီ ..အရောကျသှားမိမှာ သခြောတယျ… ပွီးရငျ ကိုဗဈ ကာလမှာ ကြှနျမတို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေို သနားဖို့ရယျ… မနိုငျဝနျထမျးနရေတဲ့ ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ ကနျြးမာရေးစနဈကို ထောကျထားဖို့ရယျ…
ကိုယျ့ကွောငျ့ ကူးစကျခံရနိုငျတဲ့ လကျလှတျဆုံးရှုံးရနိုငျတဲ့ ခဈြရသူတှကေို ထောကျထားဖို့ရယျ.. အဲလိုလေးတှေ စဉျးစားပေးပွီး ကိုယျ့အိမျထဲမှာပဲ ကိုယျခဈြတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ အောငျပှဲခံပါလို့.. အားလုံးကို တောငျးပနျ နားခြ တရားဟောနမေိမယျထငျပါရဲ့…. ဝနျထမျးကတျလေး ထညျ့သှားမှာက scrub suit နဲ့လာတာတောငျ မငျးက ဘာမို့လဲ လို့ မေးလာရငျ ကိုရီယားကားတှထေဲက စုံထောကျရဲမတှေလေို ကတျလေး ထုတျပွမလို့…
ပွီးတော့ ပွောမရတဲ့အပွငျ တုတျနဲ့ရိုကျ ဓားနဲ့ထိုးသှားရငျလညျး ဝနျထမျးကတျလေး ပါတော့ ဘယျသူမှနျးသိတာပေါ့လေ… ပိုငျရှငျမဲ့ မဖွဈနိုငျတော့ဘူး ပေါ့….. တကယျပါ.. ကြှနျမသာ ခုခြိနျ လူနာအဖွဈနဲ့ဆေးရုံပျေါမှာ ရှိမနခေဲ့ဘူး ဆိုရငျပေါ့လေ…..
ကျွန်မသာ ခုချိန် လူနာအဖြစ်နဲ့ ဆေးရုံပေါ်မှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး ဆိုရင်… Scrub Suit လေးဝတ် ဝန်ထမ်းကတ်လေး အိတ်ထဲထည့်ပြီး အောင်ပွဲခံနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဆီ ကားတန်းတွေဆီ ..အရောက်သွားမိမှာ သေချာတယ်… ပြီးရင် ကိုဗစ် ကာလမှာ ကျွန်မတို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို သနားဖို့ရယ်… မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ကို ထောက်ထားဖို့ရယ်…
ကိုယ့်ကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့ ချစ်ရသူတွေကို ထောက်ထားဖို့ရယ်.. အဲလိုလေးတွေ စဉ်းစားပေးပြီး ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ အောင်ပွဲခံပါလို့.. အားလုံးကို တောင်းပန် နားချ တရားဟောနေမိမယ်ထင်ပါရဲ့…. ဝန်ထမ်းကတ်လေး ထည့်သွားမှာက scrub suit နဲ့လာတာတောင် မင်းက ဘာမို့လဲ လို့ မေးလာရင် ကိုရီယားကားတွေထဲက စုံထောက်ရဲမေတွေလို ကတ်လေး ထုတ်ပြမလို့…
ပြီးတော့ ပြောမရတဲ့အပြင် တုတ်နဲ့ရိုက် ဓားနဲ့ထိုးသွားရင်လည်း ဝန်ထမ်းကတ်လေး ပါတော့ ဘယ်သူမှန်းသိတာပေါ့လေ… ပိုင်ရှင်မဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ပေါ့….. တကယ်ပါ.. ကျွန်မသာ ခုချိန် လူနာအဖြစ်နဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး ဆိုရင်ပေါ့လေ…..
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်(၁၄) နေရာ အတွက် မနက်ဖြန် နံနက်အထိ မိုးရွာသွန်းနိုင်မှု ခန့်မှန်းချက်
ရဲ တပ်ဖွဲ့ ကို အောင်ကြီး ပြန်လည် တရား စွဲဆိုပြီ
ယနေ့ နံက် ဆင်မလိုက် တွင် လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းလာသော YBS ( ၄၀ ) နှင့် TAXI ယာဉ်တိုက် မှု , TAXI ပေါ်ပါ လူ (၃) ဦးလုံး သေဆုံး( ရုပ်သံပါ)